Mbola karohina hatreto ireo omby lasan’ny dahalo ny faran’ny herinandro teo. Efa tara vao nampandre ny zandary tao Mangamila ny Ben’ny tanàna lefitra tao amin’io kaominina Ambanivohitra Mangamila io, anaty distrikan’Anjozorobe mahakasika ny fahaverezana omby. Ny zoma alina 19 jolay teo sahabo ho tamin’ny 11 ora alina no heverina fa nitrangan’ny fanafihana an-tsokosoko ireo biby fiompy telo.
An’ny fianakaviana iray teo Bekitay, izay eo amin’ny fokontany sy kaominina Mangamila ihany no lasibatra. Telo tamin’ireo mpitandro filaminana tao Mangamila no nohamafisin’ny zandary 3 avy ao amin’ny borigadin’i Sadabe sy ny miaramila roa avy any Analaroa. Raha ny dian’omby dia nihazo ny lalana nankany Amberobe, ao amin’ny kaominina Ambanivohitra Sahalemaka izy ireo miaraka amin’ireo malaso. Efa nampandrenesina avokoa ireo mpitandro filaminana amin’ny manodidina ary efa nogiazana ireo kizo.